मलेसियाका नाइट क्लबमा नेपाली युवती… – PathivaraOnline
Home > रोचक > मलेसियाका नाइट क्लबमा नेपाली युवती…
मलेसियाका नाइट क्लबमा नेपाली युवती…
admin July 7, 2021 रोचक 0
हरेक नागरिक-लाई रंगीन सपना देख्‍ने छुट छ। त्यही रंगीन सपना सार्थक बनाउन मानिस दौडि`रहेका छन्। सुन्दर जीवन जिउने सपनाको पछि लागेर लाखौं नेपाली युवा-युवती विदेशिन बाध्य पनि छन्। भविष्यमा जीवन-लाई सरल रेखामा हिँडाउने चाहना बोकेर वर्तमानको यौवन विदेशी भूमिमा बेच्‍न बाध्य छन् लाखौं नेपाली युवा-युवती। सबै-भन्दा धेरै नेपाली भएको देश हो, मलेसिया। त्यहाँ जान न भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ, न त कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ।
मले-सिया भूमिका श्रमिकका रूपमा खटिएका नेपालीको कथा कहाली-लाग्दो छ। त्यसमा पनि नेपाली युव`तीको कहानी झनै दर्द-नाक छ। मलेसिया, डान्स बार अनि नेपाली युवती। यी तीनै शब्‍द एक्कासि छुट्टा-छुट्टै सुन्दा आम-मानिसको दिमागमा विछट्टै पीडा-दायी चित्र बन्छ। तर मले-सियाको डान्स-बार रोज्‍नु उनी-हरुको बाध्यता हो। नेपालको राजनीतिक खिचातानी, हुने-खानेहरुको रजगजमा रमाएका केही थान मानिस-भन्दा पर बस्‍ने नेपाली हुन् मलेसिया पलायन हुने। जसले बाध्यता-लाई आफ्नो भाग्य ठानेका छन्।
उनले आँखाभरि आँ`सु पारिन्। म पनि निकै भावुक भएँ। अनि यसरी निराश हुनु हुँदैन भनेर ढाडस दिएँ। केही बेर सन्‍नाटा छायो। एका`तिर केही हुल मानिस डान्स`बारको संगीतमा रंगीन रातको स्वाद लिइरहेका थिए भने म सरिताको दुःख र पराइ भूमिको डान्स|बारमा नाच्‍न बाध्य नेपाली चेलीको भोगा`इ खोतल्दै थिएँ।
संक्रमितको उपचारका लागि डब्लुएचओले सिफारिस गर्यो नयाँ औ ष धि, कस्तो छ यसको प्र भावकारीता ?
यसरी सम्भव भएकाे थियो सिङ्गो ब्रम्हाण्ड आफै बन्न! पत्याउनुहुन्छ? अवस्य पढ्नुहाेस्